खिल परेको छ ? यसरी चिन्नुहोस्:: Naya Nepal
खिल परेको छ ? यसरी चिन्नुहोस्
पैताला वा हत्केलामा हुने खिललाई अंग्रेजीमा कोर्न भनिन्छ । यो प्राय पैतालामा काँडा बिझ्यो र निस्केन अथवा केहि टुक्रा भित्र रह्यो भने पछि गएर खिलमा बदलिन्छ ।खिल प्रायः दबाब पर्ने स्थानमा हुने गर्दछ । शरीरको कुनै एक भागमा बारम्बार घर्षण र दबाब पर्दछ र त्यहाँको छाला मृत हुन्छ भने त्यहा खिल हुन सक्छ । यो प्रायः खुट्टाको औँला, पैताला, हत्केला र हातका औँलामा देखिने गर्दछ ।
पहिचान गर्ने तरिका
खुट्टाको पैताला र हातको छालामा मोटो गाठो र खस्रोपन देखिन्छ, जसको बीच भागमा डटपेनको टुप्पोले थिच्दा दुखाई महशुस हुन्छ भने त्यो खिल हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ ।खिल हेर्दा सानो देखिन्छ । यसको बीचमा कालो टिका जस्तो चिन्ह हुन्छ । जहाँ मृत छाला उठेको हुन्छ । कुनै कुनै खिल नरम सेतो रबरजस्तो हुन्छ र छुदाँ कोमल हुन्छ ।
खिलको उपचार प्रायः यहि नै भन्ने हुदैन । प्रायःले माथिल्लो भागमा देखिने बाक्लो छालाको मृत तह काट्ने गर्दछन् । कसैले कर्नटेप लगाएर हटाउने गर्दछन् । यसलाई शल्यक्रिया गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ ।चिकित्सकको परामर्श बिना यसो गर्दा यसको दुष्प्रभाव देखिन सक्छ । साथै केही समय पश्चात फेरि खिल देखा पर्न सक्छ । त्यसैले खिलका बिषयमा एक पटक चिकित्सकको परामर्श लिनु नै उत्तम हुन्छ ।
अवैधानिक पसल सिल
उदयपुर : चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा स्थानीय प्रशासनले छड्के बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। विषयगत क्षेत्रका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा प्रशासनले छड्के अनुगमनलाई तीव्रता दिएको हो। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशीकुमार लम्सालको नेतृत्वमा रहेको टोलीले जिल्लाको प्रमुख व्यपारिक केन्द्र कटारी, बेल्टार, रामपुर र सदरमुकाम गाईघाटमा अनुगमन गरेको छ। कटारी बजार अनुगमनका क्रममा दुई वटा मेडिकल हललाई सिल गरेको छ। तोकिएको मापदण्ड पूरा नभएको, म्याद नाघेका औषधि राखेको, फार्मेसीको लाइसेन्स लिएका व्यक्ति नभइ अहेव, अनमीले औषधि बिक्री गरेको लगायतका कमजोरी देखिएकाले सिल गरिएको अनुगमन समितिका संयोजक सहायक प्रजिअ लम्सालले बताए। सात वटा मेडिकल हलमा अनुगमन गर्दा पाँच वटामा सरसफाइ नभएको, कागजहरु चुस्तदुरुस्त नभएको पाइएकाले कागजसहित प्रशासनमा उपस्थिति हुन र सरफाइको मापदण्ड पालन गर्न निर्देशन दिएको उनले बताए। त्यसैगरी सदरमुकाम गाईघाटमा सञ्चालित एक पाउरोटी कारखानालगायत दुई उद्योगमा प्रशासनले कार्वाही गरेको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रक डिभिजन कार्यालय गाईघाटको समेत उपस्थिति रहेको अनुगमनमा म्याद गुज्रेका सामान बिक्री वितरण गरिएको, लेबल लगाएका भन्दा अन्य सामग्रीहरु बिक्री गरेको पाइएकाले कार्वाही गरिएको उनले बताए।
मापदण्डविपरित उद्योग चलाइएको र आवश्यक कागजात नभएको पाएपछि कार्वाही गरिएको हो। टोलीले त्रियुगा नगरपालिका १२ डिएमगेटमा सञ्चालित रुक्सना पाउरोटी उद्योग र गणेश उज्जवल ट्रेडसलाई १०-१० हजार जरिवाना गरेको छ। अनुगमनको क्रममा उद्योग सञ्चालन अनुमतिपत्र नभएको तथा सरसफाइ नगरेको र उत्पादित सामग्रीमा लेबल नटाँसेकोजस्ता कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएको पाइएकाले कार्वाही गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रक डिभिजनका निमित्त प्रमुख रमेश दाहालले बताए। दाहालले यसअघिको पटक पटकको अनुगमनमा उद्योगले कमजोरी गरेको पाइएपछि चेतावनी दिँदै उद्योग सञ्चालकलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिइएको बताए। त्यसैगरी त्रियुगा ११ पुरानो गाईघाटस्थित सिमा मनिट्रासफरलाई बीस हजार जरिवाना गरिएको छ। चिसो पेय पदार्थको कारोवारसमेत गर्ने गरी अनुमति लिएको मनिट्रासफरले बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोलाको डिलरको इजाजतपत्र देखाउन नसकेको, सरसफाईजस्ता मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको छ। उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर बजार अनुगमन थालिएको दाहालले बताए। उनले बिगतमा जस्तो नभएर अहिले वाणिज्य विभागले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रक डिभिजनलाई उपभोक्ता हितविपरित गर्नेलाई कारबाही गर्ने पूर्ण अधिकार दिएकाले कसैको मुख नहेरी कारबाही गरिने बताए। होटल, खाद्य थोक विक्रेता, पेय पदार्थ, मासु पसल, खाजा घर, उद्योग तथा कल कारखाना सबैमा अनुगमन गरिने उनले बताए। त्यसैगरी टोलीले १५ हजार म्याद गुज्रेका सामगी नष्ट गरेको जनाएको छ।
रसुवा – माथिल्लो मैलुङ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाले अर्को वर्षदेखि विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने भएको छ ।
रसुवा र धादिङको सीमा क्षेत्र सोमदाङमा निर्माण भइरहेको ६.४२ मेगावट क्षमताको आयोजनाले एक वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने भएको हो। आयोजनाका अनुसार अहिले आयोजना निर्माणतर्फ ९८ प्रतिशत काम सकिएको छ । आयोजनामा अब करिब ६ महिनाको काम बाँकी रहेको आयोजना प्रमुख जितमान शेर्पाले बताउनुभयो ।‘नियमित काम गर्न सकिएमा करिब ६ महिनामा काम सकिन्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यस क्षेत्रमा वर्षको ६ महिनामा मात्र काम हुने भएकाले उत्पादन तालिका केहीपछि धकेलिए पनि अबको एक वर्षमा हामी विद्युत् उत्पादन सुरु गर्छौँ।’आयोजनाले प्रसारण लाइन निर्माणतर्फको काम मात्र बाँकी रहेको जनाएको छ । उहाँका अनुसार प्रसारण लाइनको काम तिहारपछि सुरु हुन्छ । हिउँ पर्ने समय, वर्षा र चाडपर्वको समयमा आयोजनामा काम नहुने भएकाले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘साइडमा रहेका कामदार दशैँ मनाउनका लागि घर जाने तयारीमा छन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अब कामदार फर्किएपछि बाँकी काम अगाडि बढ्छ ।’तोकिएको समय सीमाभित्र निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि अहिलेसम्म तीन पटक म्याद थप भइसकेको छ । आयोजनाका अनुसार भूकम्प, नाकाबन्दी, ठेकेदार परिर्वतन, भौगोलिक विकटता, कोभिड-१९, हिउँ पर्ने समयमा काम गर्न नसकिनेलगायतको कारण समयमा नै विद्युत् उत्पादन हुन नसकेको हो ।हरेक वर्ष असारदेखि भदौसम्म र पुषदेखि चैतसम्म दुई चरणमा निर्माण कार्य अवरुद्ध हुने गरेको छ । आयोजनाको निर्माणको काम २०६९ सालदेखि सुरु भएको हो ।